बच्चाहरुको लागि १५ वर्षसम्म चल्ने फलामको कम्प्युटर ! « Kakharaa
बच्चाहरुको लागि १५ वर्षसम्म चल्ने फलामको कम्प्युटर !
२७ भदौ, एजेन्सी । पेरुको वावाल्यापटप टेक्नोलोजी कम्पनीले नयाँ र सस्तो प्रविधिबाट बनेको फलामको कम्प्युटर सार्वजनिक गरेको छ ।
यो एकदमै सस्तो र सजिलैसँग मर्मत गर्न मिल्नेछ । यसलाई वावाल्यापटप नाम दिइएको छ । कम्पनीले यो कम्प्युटर १५ देखि २० वर्षसम्म चल्ने दाबी गरेको छ । वावाल्यापटप पेरुको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिस र बच्चाहरुको लागि तयार गरिएको हो । यसको तौल पनि हलुका भएको बताइएको छ ।
२०१५ मा यसको प्रोटोटाइप मात्र बाहिर आएको थियो तर २०१९ मा यसको २.० भर्जन पनि सार्वजनिक भयो । यसमा लाइनेक्स अपरेटिङ सिस्टम राखिएको छ । यो कम्प्युटरको मूल्य २७ हजार २ सय नेपाली रुपैयाँ पर्नेछ । अहिलेलाई पेरुमा मात्र सार्वजकि गरिएको यो ल्यापटप अन्य देशमा निर्यात गर्ने वा नगर्ने भन्ने जानकारी कम्पनीले गराएको छैन ।
विशेषगरी बच्चाहरुले कम्प्युटर वा ल्यापटप चलाउँदा फुटाउने समस्या बढी देखिएकोले आफूहरुले फलामको क्यासिङ प्रयोग गरेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले डिभाइसको सुरक्षामा पनि ध्यान दिइएकोले यो एकदमै फलदायी रहेको कम्पनीको भनाइ छ । यो कम्प्युटरलाई विजुलीमाबाट मात्र नभएर सोलारबाट पनि चाार्ज गर्न सकिन्छ ।
स्मार्ट सेलबाट यसकारण खुल्दैन नागरिक एपको खाता
काठमाडौं । सरकारले हालै परीक्षणको रुपमा सार्वजनिक गरेको नागरिक एपमा उत्साहपूर्ण आकर्षण देखिएको छ ।
एनसेलको नयाँ च्याटबोट सेवा ‘माया’ सुरु
काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो डिजिटल ट्रान्सर्फमेसन योजना अनुरुप आफ्ना ग्राहकका लागि च्याटबोट सेवा ‘माया’ सुरु
क्यूआर कोड स्क्यान गरेर अब बसको टिकट काट्न सकिने
काठमाडौं । गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कमा ‘क्यूआर कोड’ मार्फत बस टिकटको भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ
वाईफाईमा २० वर्ष यताकै ठूलो परिवर्तन आउँदै
काठमाडौं । वाईफाई अझ धेरै प्रभावकारी हुँदैछ । यो वर्ष बजारमा आउने धेरै फोन तथा
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : आर्मी र पुलिसको जित
काठमाडौं । विभागीय टोलीद्वय त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप
ललिता निवास जग्गा प्रकरणः पूर्वमुख्य सचिवदेखि न्यायाधीशसम्म मुद्दामा तानिँदै
काठमाडौं । ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिएको प्रहरीको